» मतदानमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो: श्रेष्ठ
मतदानमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो: श्रेष्ठ
२०७९ बैशाख ३०,शुक्रबार १९:५६
मकवानपुर । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हटेर मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन आज भएको छ । जिल्लाको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका र ८ वटै गाउँपालिकामा उत्साहजनक रुपमा मतदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । १० वटै पालिकामा मतगणनास्थल तोकिएको छ । मतदान केन्द्रहरुबाट मतगणनास्थलतर्फ मतपेटिकाहरु ल्याउने क्रम जारी छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना आजै रातिबाट गर्ने जनाएको छ ।
मकवानपुरका २ लाख ९४ हजार ९ सय १९ जना मतदातामध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । मतदान कार्यक्रम, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटना, मतगणनाको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा हामीले मकवानपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत डिल्लिरन्त श्रेष्ठसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ ।
सवाल: मकवानपुरमा स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७९ को मतदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ, समग्रमा यहाँले आजको मतदान कार्यक्रमलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?
उत्तरः मकवानपुरमा एकदमै उत्साहजनक तवरले मतदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यसको लागि सबै पक्षको सहयोग प्राप्त भएको छ । त्यसैको प्रतिफल जस्तो लाग्छ मलाई, हामीले मतदान कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्यौँ । सुरक्षा प्रबन्ध पनि अत्यन्तै राम्रो भयो । विशेष गरी आचारसंहिताको परिपालनाको सन्दर्भमा मकवानपुर उदाहरणीय बन्यो भन्ने मेरो बुझाई छ । त्यसको लागि यहाँका युवा पत्रकार साथीहरुले जुन किसिमको जागरुकता देखाइदिनु भयो र उहाँहरुले जुन किसिमले सुरुकै दिनहरुबाट निगरानी राखिदिनुभयो त्यसकारण आचारसंहिता पालनाको सन्दर्भमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन स्वच्छ, निश्पक्ष एवम् शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । मतदाताहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । हामी मटपेटिका मतगणनास्थलसम्म ल्याउने क्रममा छौँ । ६५ प्रतिशत भन्दा माथि मत खसेको छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । एकिन तथ्याङ्क हामी सार्वजनिक गर्ने प्रयास गर्दै छौँ ।
सवाल: राजनीतिक दल, उम्मेदवार, पत्रकार, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालगायतको सहयोग कस्तो पाउनुभयो ?
उत्तरः सबै पक्षको सहयोग÷समन्वय एकदमै राम्रो रह्यो । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुकै बीचमा रहेर हामीले छलफल गर्यौँ । त्यसपछि हामी पत्रकारहरुसँग पनि नजिकमा रहेर काम गर्यौँ । काम कारबाही कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सञ्चार क्षेत्रमार्फत् हामीले पारदर्शीता प्रदर्शन गरिरह्यौँ । परिवेक्षक एवम् सामाजिक अभियान्ताहरुसँग पनि समन्वय भएको छ । सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवारहरु, पत्रकारलगायतकै सहयोगकोे प्रतिफल स्वरुप सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । म आभार व्यक्त गर्दछु ।
सवाल: यो अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटना कति भए ? कति जनालाई कारबाही गर्नुभयो ?
उत्तरः हामीलाई आधिकारिक रुपमा ३१ वटा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटना दर्ता भएका थिए । त्यसमा अधिकाँश कर्मचारीहरुको थियो । कर्मचारीको सन्दर्भमा पनि उहाँहरुले सामाजिक संजाल प्रयोग गरेको सन्दर्भ बढी थियो । पहिलो कारवाही हामीले जजसकोे हकमा त्यस्तो उजुरी परेको छ, उहाँहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने काम गर्यौँ । र पुष्टि भएका व्यक्तिहरुको हकमा निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि जिम्मेवारी नदिने हामीले निर्णय गरेका थियौँ । त्यसपछि उहाँहरुले जानी नजानी हामीबाट यस्तो कार्य भएको भन्दै क्षमायाचना पनि गर्नुभएको छ ।
उहाँहरुलाई हामील्े सचेत गराएका छौँ । उम्मेदवार र राजनीतिक व्यक्तिको हकमा केही गुनासो आएको थियो । उहाँहरुलाई पनि सचेत गराउने कार्य गर्यौँ । केही सामूहिक उजुरीहरु चाँही परेको थियो । सार्वजनिक ठाउँमा चुनाव चिन्ह, झण्डा राखेको भन्ने उजुरी थियो । त्यसमा चाँही हामीले सम्बन्धित दललाई सचेत गरायौँ । उहाँहरुले पनि सहजै त्यसलाई स्वीकार गरेर सँच्चिएर अगाडि बढ्न तयार हुनुभएको अवस्था थियो ।
सवाल: मकवानपुरमा कति प्रतिशत मत खस्यो, सहभागिता कस्तो पाउनुभयो ?
उत्तरः केही मतदान केन्द्रमा म आफैँ पनि पुगेको थिएँ । त्यहाँ सबै समूदाय, वर्ग, लिङ्ग, पेशा, क्षेत्रलगायतको उत्साहजनक सहभागिता देखियो । स्थानीय सरकारप्रति राज्यको र जनताको तर्फबाट पनि अत्यन्तै उत्साहजनक सहयोग भएको पाइयो । विशेषगरी युवा वर्गहरुको सहभागिता रहेको थियो । केही युवा क्लबहरुले संयम्सेवकको रुपमा पनि सहयोग गर्नुभएको छ । भोट हाल्न जानेहरुमा पनि उत्साह देखिएको थियो । यसले जनतामा हाम्रो भविष्य लोकतन्त्रमा नै छ भन्ने विश्वास बढेको मेरो बुझाई छ ।
सवाल: मतपेटिका ल्याउने क्रम जारी छ । मतगणना कहिलेबाट सुरु हुन्छ, मतगणना गरिसक्न कति समय लाग्ला ?
उत्तरः हाम्रो प्लान आजै सुरु गर्ने भन्ने थियो । तर दिउँसो पानी परेकोले मतदान कार्यक्रम सक्न केही ढिलो भयो । मत पेटिकाहरु ल्याउनै राति ११ बज्ने अनुमान गरेका छौँ । अब हामी पहिला राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुसँग छलफल गर्छौँ । उम्मेदवारहरुको राय बुझ्छौँ । उहाँहरुले हामी थाकेका छौँ भोलिबाट मात्रै गरौँ भन्नुभयो भने ठिकै छ, नत्र हामी त मत पेटिका ल्याएपछि गणनाको लागि तयार छौँ ।
सवाल: मतगणनाको व्यवस्थापन कसरी मिलाइएको छ ?
उत्तरः हामीले मतगणनास्थलको व्यवस्थापन राम्रोसँग मिलाएका छौँ । प्रविधिको कारणले सुरक्षाको क्षेत्रमा निकै सहज भएको छ । हामीले मतगणना स्थलमा नै सिसिटिभि क्यामेरा जडानको व्यवस्था मिलाएका छौँ । हामीले पारदर्शीताको विषयलाई पनि ध्यानमा राखेका छौँ । गणनामाथि जनतालाई विश्वास दिलाउने गरी निश्पक्ष तरिकाबाट मतगणना गर्छौँ । यस विषयमा पत्रकार साथीहरुको भूमिका छ । सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँछौँ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौँ । पत्रकार साथीहरुमार्फत् मतगणनाको पारदर्शीता कायम गर्छौँ ।
सवाल: अन्तमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
उत्तर : म सबैप्रति आभारी एवम् खुसी छु । मकवानपुरमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जुन मौका प्राप्त भएको थियो, सबै पक्षको सहयोगबाट मतदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अब मतगणना पनि हामी स्वच्छ र निश्पक्ष तवरबाट गर्छौँ । सबै पक्षको उत्साहजनक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । मतदाताहरु पनि निर्वाचनमा उत्साहजनक रुपमा सहभागी हुनुभयो । यी सबै कुरा हेर्दा स्थानीय निर्वाचनले हाम्रो भविष्य, लोकतन्त्र, विधि र पद्धतिले जित्दै वा स्थापित हुँदै गएको छ भन्ने जनताको बुझाइ रहेको पाइयो । एउटा भयरहित समाजतर्फ हामी उन्मुख छौँ भन्ने कुरालाई आजको दृश्यले पुष्टि गरेको छ । सबैप्रति म आभारी छु ।